Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid AirPods Max, waa sida ay dib ugu noqdaan | Waxaan ka socdaa mac
Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid AirPods Max, waa sidan sida ay dib ugu noqdaan
Manuel Alonso | | Tababarada
Marka shixnadaha ah AirPods Max kaliya soo bandhigtay Apple oo tixgelinaysa inay tahay shey cusub. Taasi maahan abuuritaanka wax kale, in kasta oo walxaha jira loo adeegsaday aalado kale, had iyo jeer way wanaagsan tahay in la ogaado sida loo xaliyo dhibaatooyinka ka dhalan kara. Taasi waa sababta aan kuu tusineyno labada nooc ee sida loo cusbooneysiiyo AirPods Max cusub.
AirPods Max waa qalab gebi ahaanba cusub. ugu yaraan illaa inta naqshadeynta laga hadlayo. Dhagaha dhagaha dhagaha ee ugu horreeya Apple iyadoo sicir fadeexad ah iyadoo qaar ka mid ah walxaha horayba loogu yaqaanay taajkii ay Apple Watch horey u haysatay. Taaj taa oo yeelan doonta caan badan haddii sameecadaha dhagaha aysan u shaqeynayn sidii la rabay.
Ahaanshaha aaladda noocan oo kale ah dhawaanahan waxaa suurtagal ah in khaladaadka ay ka badan yihiin kuwa kale oo waqti badan suuqa ku jira. Taas macnaheedu maaha inay khaladaad leedahay, laakiin waxay ka dhigan tahay inay u fududaan tahay inay jiraan. Waxaan had iyo jeer xal ugu helnaa faraha. Dib-u-dejinta caanka ah. Waxaan leenahay laba nooc oo iyaga ka mid ah.
Dib u dejin jilicsan:
Kahor intaanan shaqada udaarin, Xusuusnow waa in lagu soo oogo oo ay ku jiraan USB-C iyo hillaaca hillaaca. Marka lacag kugu filan, waa inaan qabanaa hawlgalka soo socda:
Riix oo hayso badhanka Codka Jawiga adigoo adigana riixaya taajka. Marka illaa aad ka aragto nalka LED-ka qeybta hoose ee midig midab leh
Hadda waxaad dib u dejineysaa AirPods Max. Dib u dejin jilicsan taas inta badan waa ku filan tahay xalinta dhibaatooyinka badankood. Haddii kale, waxaan heysanaa ikhtiyaarka ah inaan dib ugulaabno qiimayaasha warshadda. Wixii loogu talagalay:
Dib u dejinta warshadda:
Riix oo hayso badhanka Codka Jawiga adigoo adigana riixaya taajka. Marka illaa aad ka aragto nalka LED-ka ee dhinaca midig ee hoose soo baxaya bilic midab leh oo halkaas ka socda ilaa uu ka gaaro caddaan.
Haddii sidan oo kale aanan u xallin karin dhibaatada sidoo kale, waa inaan wacnaa Taageerada Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Haddii aad dhibaatooyin ku qabtid AirPods Max, waa sidan sida ay dib ugu noqdaan
Qaab-dhismeedka qoraalka "Gacmo-dhaqashada" ayaa loo beddelay watchOS 7.2
Jiilka saddexaad ee AirPods oo leh naqshad Pro iyo 200 doolar